Iyunithi yesibini - Tejomayam
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDhanalakshmi
Uluhlu lunamagumbi angaphantsi anefenitshala ngokupheleleyo asanda kwakhiwa ngokuzimeleyo. Ibekwe kufutshane nesibhedlele esikhethekileyo seKIMS kwaye ifikeleleka ngokulula kwisikhululo sikaloliwe saseKochuveli kunye neSikhululo sikaloliwe saseTrivandrum.
Uluhlu lunegumbi elinye lokulala elingaphantsi. Igumbi lokulala line-air-conditioning kwaye kukho igumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Kukho igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi. Umabonwakude ngoqhagamshelo lwekhebula unikezelwa kwindawo eqhelekileyo
Sibekwe kufutshane nesibhedlele se-KIMS kunye nelali yabakhenkethi yase-Akkulam. Iziko leeSayensi zoMhlaba kunye neZiko leSizwe leNtetho neNtetho likwakhona kwindawo. Indlu ikumgama oziikhilomitha ezi-6 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseTrivandrum kunye ne-2.8km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseKochuveli. I-Trivandrum Technopark ijikeleze i-10 kms kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Dhanalakshmi
Ndingafumaneka kwifowuni yam/ ku-whatsapp ukusuka ngo-9am ukuya ku-7pm.